Tanora mpanao fihetsiketsehana nanery ny filoha hihemotra
Fihetsiketsehana manohitra ny Brigade manokana manohitra ny halatra (Sars) mankahala an'i Nizeria dia famantarana fa mahita feo ny tanora marobe eto amin'ny firenena ary mitaky fanavaozana ao amin'ny firenena be mponina indrindra eto Afrika, miavaka amin'ny fitondrana tsy mahomby hatramin'ny nanombohany. fahaleovan-tena 60 taona lasa.
Na dia noteren'izy ireo aza ny filoha mba handrava ilay singa, tsy afa-po izy ireo satria te hanana fanavaozana tanteraka ny polisy ary ny agents of the department of jiolahim-boto entina amin'ny fitsarana.
Saingy nihoatra izany ny zava-misy satria ny onjan'ny fihetsiketsehana dia nanome sehatra ny ampahan'ny tanora mponina ao amin'ny firenena izay tena tsy afa-po.
Eny an-dalambe, ireo matso dia mazàna mipetraka ny ankamaroany, ny sasany manana volo nolokoina, orona voatsatoka ary vatana manao tombokavatsa.
Ity no karazana fanangonan-karena izay mailaky ny mpitandro ny filaminana antsoina hoe mpanao heloka bevava, saingy raha ny marina dia tanora mpiasa no voatery niady irery nefa tsy nisy ny fanohanan'ny fanjakana.
KOPY MAMPISORONANA SATRIAREUTERS
legendNosakanan'ireo mpanao fihetsiketsehana ny làlambe ao amin'ny tanàna lehibe indrindra ao Lagos
Ny ankamaroan'izy ireo dia eo anelanelan'ny 18 sy 24 taona, mbola tsy nahalala herinaratra marin-toerana tamin'ny fiainany, tsy nahazo tombony tamin'ny fanabeazana maimaim-poana tao amin'ny firenena ary nahita ny taonan'ny oniversite notsoahina sy nohalavaina. mpampianatra mitokona.
Ny fahasosorana amin'ny polisy dia taratry ny fahasosoran'ny fanjakana amin'ny ankapobeny.
“Inona no tombony azoko tamin'ity firenena ity hatramin'ny nahaterahako? Nanontany an'i Victoria Pang, nahazo diplaoma 22 taona, izay iray amin'ireo fihetsiketsehana tao an-drenivohitra Abuja - ary iray amin'ireo vehivavy maro izay lohalaharana tamin'ilay fanoherana.
"Nilaza ny ray aman-dreninay fa nisy fotoana nahafinaritra ny raharaha, saingy tsy niaina izany velively izahay," hoy izy.
Fa maninona no nankahalaina be i Sars?
Matetika ireo polisy Nizeriana dia malaza amin'ny kolikoly, herisetra ary tsy fanajana kely ny zon'olombelona, ​​fa ny olona eto kosa dia manana fihetseham-po mahery vaika amin'i Sars, izay nalaza noho ny fahalotoan'ny tanora. .
Tatitra iray navoakan'ny Amnesty International tamin'ny volana jona no nilaza fa nanoratra farafahakeliny 82 tranga fampijaliana, fitondrana ratsy ary famonoana olona ivelan'ny fitsarana an'i Sars eo anelanelan'ny Janoary 2017 sy Mey 2020.
"Ny manampahefana Nizeriana dia tsy nanenjika na dia manampahefana tokana na dia teo aza ny lalàna fanoherana ny fampijaliana natao tamin'ny 2017 ary porofo manamarina fa ny mpikambana ao aminy dia manohy mampiasa fampijaliana sy fampijaliana hafa mba hamonoana, hanasazy ary hamoahana vaovao avy amin'ireo ahiahiana," hoy ny vondrona.
legendNy tanora no mandrafitra ny ankamaroan'ny mponina Nizeriana
Ireo izay heverina ho "manintona" na manan-karena - mety ho fiara tsara ho an'ny solosaina finday na ireo izay misy tombokavatsa na dreadlocks - dia nahasarika ny sain'ny manamboninahitra Sars.
Ny fakantsary ny tanora Nizeriana dia miorim-paka ao amin'ny fiarahamonina.
Ireo tanora salama tsara ary tsy mifanaraka amin'ny fomba fiainany fitsipika Avy amin'ity firenena mpandala ny nentin-drazana ity dia matetika no antsoina hoe "Yahoo-Boys" - teny iray mahaliana ho an'ny mpisoloky amin'ny Internet.
Marina indrindra izany ho an'ireo izay miasa miaraka amin'ny solosaina finday, raha ny mpifanila trano sasany kosa niantso mpiambina ireo tanora miasa ao an-trano.
"Ny faritra nisy ahy dia niantso ny polisy mba haka ahy satria mbola tao an-trano aho, namelona ny milina mpamokatra herinaratra ary miaina tsara," hoy i Bright Echefu, mpamorona tranokala 22 taona, izay nanatevin-daharana ny fihetsiketsehana tao Abuja, tao amin'ny BBC. .
legendIreo mpanao fihetsiketsehana dia naneho ny fahasosorany tamin'ny polisy sy ny fanjakana amin'ny ankapobeny
Nandritra ny fotoana lava be, ny tombokavatsa, dreadlocks ary ny fanindrohana na misafidy làlan'ny asa tsy mahazatra dia mifandray amin'ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny sasany. fianakaviana, fikambanana ara-pivavahana, vondrom-piarahamonina ary koa sekoly.
"Ahoana no mahatonga ahy ho mpanao heloka bevava? Joy Ulo, mpianatra amin'ny ambaratonga voalohany dia nanontany tamin'ny fihetsiketsehana iray.
Ary ny ampahany amin'izany dia avy any ambony.
Ny filoha Muhammadu Buhari, 77 taona, izay taloha dia niantso ny tanora Nizeriana ho 'kamo' manoloana ny mpijery iraisampirenena, dia nanoro hevitra vao haingana ireo izay potika ny fivelomana ara-toekarena noho ny fanidiana coronavirus handray an-tanana amin'ny fambolena, satria manan-kery izy ireo.
Na dia misy ambaratongam-pandaminana iray aza ireo olona toa mandrindra ny hetsika amin'ny tambajotra sosialy dia tsy te ho voatondro ho mpitondra.
Ankizy novonoina rehefa avy nanafika sekoly iray tany ...
Delegasiona miaramila Nizeriana 15 no tonga…
Fifandonana eo amin'i Ferdinand Ngoh Ngoh sy i Laurent Esso (Direct) ho an'ny…
Afaka nanangona ny zava-drehetra izy ireo, nanomboka tamin'ny rano, sakafo ary sora-baventy ka hatramin'ny fandoavan-dohan'ireo nosamborina.
Ny vola dia nangonina tamin'ny alàlan'ny fivelom-bahoaka - ny sasany tamin'ireo fanomezana dia avy any ampitan-dranomasina, ny ankamaroany dia avy amin'ireo orinasa Nizeriana IT, miaraka amin'ny lasibatra fanoratana mora ataon'ny mpitandro ny filaminana.
Ireo mpandrindra tsy ofisialy dia nandà ny hisafidy ireo mpitarika ny hetsika, ary nilaza fa tsy tian'izy ireo hisy olona hifampiraharaha amin'ny governemanta ao ambadiky ny vonoan'izy ireo, fikomiana tsy dia henjana ataon'ny sendika manerana ny firenena, izay manana ny lazany hanafoana ny fitokonana kasaina hatao. aorian'ny fivoriana. tompon'andraikitra amin'ny governemanta.
Fa raha ny marina, ny ankamaroan'ny fahombiazan'ny fihetsiketsehana dia miankina amin'ny olo-malaza sy ny mpanentana amin'ny media sosialy - ireo kintana vaovao noforonin'i Instagram, Snapchat ary Twitter.
Ny fihetsiketsehana teny an-dalambe dia nivory ny alarobia lasa teo ary nihanitombo ny alakamisy taorian'ny nidiran'ny mpitendry zavamaneno Runtown sy Falz.
Saingy ny tena hery dia natsindrona tamin'io andro io rehefa nisy vehivavy iray antsoina hoe Rinu nanetsiketsika ny mpanao fihetsiketsehana hafa handany ny alina ivelan'ny tranon'ny governemanta any Lagos.
Miampy ny feon'ireo olo-malaza amin'ny tenirohy #EndSARS, nitsambikina teo amin'ny tampon'ny fironana Twitter manerantany izy ary nahazo fanohanana iraisampirenena avy amin'ireo mpilalao baolina kitra monina any UK toa an'i Mesut Ozil sy Marcus Rashford, mpitendry sy mpilalao.
Ny superstars manerantany Nizeriana Wizkid sy Davido, izay anisan'ity taranaka mpanao fihetsiketsehana ity koa dia nanatrika ara-batana tany Londres sy Abuja - toerana nanakanana ny polisy tsy hitifitra ny mpanao fihetsiketsehana.
Nanenjika ireo mpanao gazety nentim-paharazana avy tany amin'ny toerana fanoherana ihany koa ireo mpanao fihetsiketsehana, niampanga azy ireo ho nanivana ny vaovao momba ny fanentanana #EndSARS ary nanome tantara hafa ho an'ireo tsy an-tserasera.
"Tolona fanoherana ny fametrahana fanjakana izany," hoy i Echefu.
"Ho anay na hanohitra anay ianao, tsy misy afovoany," hoy izy.
Mpanohitra maro no nilaza fa tsy niraharaha ny fampitandremana avy amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampiasa mba tsy hiditra amin'ny fihetsiketsehana.
Tsy misy tanora manao tsinontsinona intsony
Ny sasany mino fa ity no fanombohana zavatra manokana any Nizeria satria volana nankalazan'ny firenena ny faha-60 taonan'ny fahaleovantenany.
Maherin'ny 60% ny mponina Nizeriana dia latsaky ny 24 taona, araka ny tarehimarika isan'ny mponina ao amin'ny ONU.
Fa ity vondrona ity dia efa nampangaina hatry ny ela fa manana fotoana amin'ny tsy fahampiana - fahitalavitra tena izy, baolina kitra ary media sosialy - fa tsy mifantoka amin'ny fitantanana.
legendTany Lagos, nanazava ny fitarainany tamin'ny polisy ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ilay fihetsiketsehana
Andalana maro amin'izy ireo no efa naheno imbetsaka hatramin'ny taranaka taloha, fa noho ny fanerena ny filoha hamongotra an'i Sars ary hivoaka amin'ny fahitalavitra mivantana hanambara izany, dia voalaza fa tanora Nizeriana nahatsapa izao ny hery ananan'izy ireo.
“Ry oloko, iriko mba hiparitaka amin'ny tanora Nizeriana rehetra ity hafatra ity. Re ny feonao », hoy i Wizkid tamin'ny fihetsiketsehana tamin'ny Alahady tany London.
“Aza avela hisy hilaza aminao fa tsy manana feo ianao. Manana feo daholo ianareo! Ary aza matahotra miteny.
"Ny fifidianana manaraka  hasehontsika ny tena hery," hoy izy.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://www.bbc.com/news/world-africa-54508781
JK Rowling dia nanapaka ny fahanginany momba ny fandefasana an'i Johnny Depp - Daily Mail - Video
Vanessa Paradis dia manamarika ny fialonana an'i Charlotte Gainsbourg - Video
Ankizy novonoina taorian'ny nanafika ny sekoly tany Kamerona
Solontena iray misy miaramila Nizeriana 15 no ao Kamerona
Fifandonana eo amin'i Ferdinand Ngoh Ngoh sy i Laurent Esso (Direct) noho ny fanakanana ny…
Fanararaotana, sarany visa nohazoana vola tamin'ny masoivoho Kameroney any Frantsa